Kaspersky 2011 Offline Updates - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Updates Distribution for KAV / KIS 2011 Sun June 20 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2011 Sun June 27 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2011 Sun July42010
Updates Distribution for KAV / KIS 2011 Sun July 11 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2011 Sun July 18 2010
Kaspersky Anti-Virus/Internet Security 2010 ကို Offline Updates ဘယ်လို လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာရယ် ၊ အသင့် Download ချနိုင်မယ့် offline updates တွေကိုရယ် အားလုံး ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ - အခု နောက်ပိုင်း Kaspersky Anti-Virus/Internet Security 2011 ပေါ်လာတော့ ကျွန်တော့် Topic ကလည်း 2010 မှာတင် ရပ်နေလို့ မဖြစ်တာနဲ့ 2011 ဘက်ကို ဆက်ကူးလိုက်တာပါ။ Kaspersky Anti-Virus/Internet Security 2011 Offline updates ရယူနည်းနဲ့ Kaspersky Anti-Virus/Internet Security 2010 offline updates ရယူနည်းက အတူတူပါပဲ - ကျွန်တော်အရင် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Kaspersky Offline Update လုပ်ဆောင်နည်း - နည်းလမ်း ( ၃ ) ခုထဲက ဒုတိယနည်းဖြစ်တဲ့ Updater.bat file အား အသုံးပြု၍ install လုပ်ဆောင်ခြင်း ကို အသုံးပြုပြီး offline updates တွေကို ရယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နည်း အားလုံးတူညီပေမယ့် အသုံးပြုရမယ့် Updater.exe ကတော့ မတူညီပါဘူး။ ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့် offline updates တွေကို မစောင့်နိုင်မယ့် မိသားစုဝင်များအတွက် offline updates တွေကို ရယူတဲ့ နေရာမှာ တစ်ခုချင်းစီမှာ ပြောင်းလဲအသုံးပြုရမယ့် Updater.exe တွေကို ဒီအောက်မှာ Download ချနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Updater.exe for Kaspersky Anti-Virus 2011
Install လုပ်ဆောင်နည်း အဆင့်ဆင့်ကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းပါ။
ပထမဆုံး အောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော် Download ချဖို့ ပေးထားတဲ့ Kaspersky Anti-Virus 2011 Offline Updates ကို အရင်ဆုံး ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပါ။
* Main application window ကို အရင်ဖွင့်ပါ။
* Main application window ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ Update tab ကိုသွားပါ။
* Main application window ရဲ့ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်နားမှာ ရှိနေတဲ့ Settings button ကို click ပေးပါ။
* Settings window ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ Update source tab အောက်က Settings button ကို click ထပ်ပေးပါ။
* Update settings window မှာ Source tab ရဲ့ အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ Add button ကို click ပေးပါ။
* နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ ဝင်းဒိုးကနေ Download ချပြီး ဖြည်ထားတဲ့ Updates folder ရှိတဲ့နေရာကို ညွှန်ပေးပါ။ ( ဒီနေရာမှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံနဲ့ နေရာချင်း လွဲကောင်းလွဲနေနိုင်ပါတယ်။ )
* Select folder source window က OK button ကို click ပေးပါ။
* Update settings window ရဲ့ Source tab မှာ Kaspersky Lab update serevers ကို uncheck ပေးပါ။
* Update settings window က OK button ကို click ပေးပါ။
* Settings window က OK button ကို click ထပ်ပေးပါ။
* Databases နဲ့ modules update process ကို စ run နိုင်ပါပြီ။
ပထမဆုံး အောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော် Download ချဖို့ ပေးထားတဲ့ Kaspersky Internet Security 2011 Offline Updates ကို အရင်ဆုံး ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပါ။
Kaspersky Internet Security 2011 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2011 တို့အတွက် Offline Updates တွေကတော့ ဒီအောက်မှာပါ။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun June 20 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KIS 2011 Sun June 20 2010
Last edited by KznT; 22-12-2010 at 04:56 PM..
ခေါက်ရောင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, နွယ်လေးမေ, blacck, linthuraaung, pannuko
ပြန်စာ - Kaspersky 2011 Offline Updates
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ အခုလိုမတတ်လို့ မသုံးဖြစ်တာကြာပြီ အခုတော့ပြန်သုံးကြည့်မယ်နော်.......
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kolatt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
kav 11 offline updates လုပ်တဲ့ Updater.exe for Kaspersky Anti-Virus 2011 လေးကိုတင်ပေးပါအုံး
အစ်ကိုတင်ပေးထားတဲ့ kav က Updater.exe for Kaspersky Anti-Virus 2010 ပဲပါနေလို့ပါ
Last edited by tu tu; 27-06-2010 at 06:22 PM.. Reason: remove quote
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ထွန်းဝင်းနိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by ထွန်းဝင်းနိုင်
kav 11 offline updates လုပ်တဲ့ဒေတာဘေ့လေးကိုတင်ပေးပါအုံး
အစ်ကိုတင်ပေးထားတဲ့ kav က 10 ပဲပါနေလို့ပါ
ဘာကိုလိုချင်တာလဲ မသိဘူး ကျွန်တော် အကုန်တင်ပေးထားပါတယ် ကိုထွန်းနိုင်ရေ ကျွန်တော်ဒီလို ဖော်ပြထားပါတယ် -
ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့် offline updates တွေကို မစောင့်နိုင်မယ့် မိသားစုဝင်များအတွက် offline updates တွေကို ရယူတဲ့ နေရာမှာ တစ်ခုချင်းစီမှာ ပြောင်းလဲအသုံးပြုရမယ့် Updater.exe တွေကို ဒီအောက်မှာ Download ချနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မဒေါင်းချင်ပဲ ကျွန်တော် တင်ထားတာပဲ ဒေါင်းလုပ်ချမယ် ဆိုရင်လည်း ပို့စ်ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ Updates Distribution for KAV / KIS 2011 ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ဖို့ ပေးထားပါတယ်။
ဘာနေရာများ လွဲနေလဲ မသိဘူး - ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြား မေးချင်တာမျိုးလား ??
Update !! သြော် ကျွန်တော်သိပြီ - ကျွန်တော် စာမှားရိုက်မိတာ ကိုထွန်းဝင်းနိုင်ရေ - အဲတာ KAV 2010 မဟုတ်ပါဘူး KAV 2011 အတွက်ပါ။ ကျွန်တော် ပြင်ထားလိုက်ပါပြီ။
I'm sorry if you had any inconvenience.
Last edited by KznT; 24-06-2010 at 08:32 PM..
အခုညီလေး စက်က အင်တာနက်ရပါတယ်
မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင် အင်တာနက်မရတော့တဲ့အတွက် အခုတည်းက offline updates ကို နေ့တိုင်းဒေါင်းချင်ပါတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်ရောက်မှ စပြီးတော့ဒေါင်းရင် အချိန်ကြာမာဆိုးလို့ up to date ဖြစ်အောင်အခုတည်းကမှဒေါင်းရင်ရမလားလို့ မေးချင်တာပါ
အခု ညီလေး စက်က kav သုံးတာပါ kav offline update လုပ်ဖို့database ကိုဒေါင်းရင် problem များတတ်လာနိုင်လားလို့မေးချင်တာပါခင်ဗျ
kav က Updater.exe for Kaspersky Anti-Virus 2011 ကို password protected လို့ပြနေလို့ပါ ခင်ဗျ
Offline Updates က နေ့တိုင်း Download လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး - သူက အများဆုံး ရှိလှ တစ်ပတ်မှ 2MB -3MB ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲ Databases က Updates တက်တာပါ - ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ ကျွန်တော်တို့ ဒီတစ်ပတ် offline updates ကို ဒေါင်းလိုက်တာ 65MB ရှိတယ် ဆိုပါစို့ - နောက်နှစ်ပတ်ကျော်လောက်မှ ပြန်လာဒေါင်းလည်း 70MB ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ရှိမှာပါ - တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်သွားရင် အင်တာနက်ဆိုင်ကနေ တစ်ဆင့် ဖိုရမ်ကို တစ်ပတ်တစ်ခါ ဒါမှမဟုတ် ၂ ပတ် ၁ ခါလောက် လာပြီး ကျွန်တော် အပတ်တိုင်း တစ်ပတ်တစ်ခါ တင်ပေးမယ့် offline updates တွေထဲက နောင်ဆုံးတင်ပေးထားတဲ့ offline updates ကို ဒေါင်းပြီး Updates ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။ တစ်ပတ်တစ်ခါ တင်ပေးတယ် ဆိုတာ ကြားထဲမှာ အရမ်းရက်ခြားသွားရင် Databases က Updates မဖြစ်မှာ စိုးလို့ပါ။ ဒီ့ထက် နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် ကျွန်တော် KIS/KAV 2010 အတွက် OFFLINE UPDATES တွေ ပေးထားတဲ့ နေရာမှာ အပတ်စဉ်အလိုက် ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်အောင် ခုလို ဖော်ပြထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဖိုင်တွေထဲက ကိုထွန်းဝင်းနိုင် အင်တာနက်ဆိုင်ကို Updates ဖိုင်တွေ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ ရောက်လာတဲ့ အခါ ဖော်ပြပါအတိုင်း ပုံစံတူ မြင်ရမယ့် အထဲက အောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ နောက်ဆုံးရက်က Updates ကိုပဲ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ လိုပါတယ်။
သူ့ကို ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်တာနဲ့ သူ့မတိုင်ခင် တင်ထားပေးပြီးသား Updates အားလုံးအပါအဝင် အဲ့ထဲမှာ ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရက်အလိုက်က ရှိသမျှ Updates ဖိုင်အားလုံးဒေါင်းလုပ်ချဖို့ မလိုပါဘူး။ နောက်ဆုံး တစ်ခုတည်း ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ Updates ဖိုင်ကလည်း အများဆုံးရှိလှ 150MB ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပါ။ အဲတာကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီးရင် ကျွန်တော် ဖော်ပြထားပြီးသားနည်းနဲ့ Updates ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ ခုလိုလုပ်တာက နေ့တိုင်း အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ပြီး update ပေးထားတာလောက်တော့ databases က update မဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် ၂ ပတ် ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ သုံးဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲလိုမှ မလုပ်ချင်ရင် နောက်တစ်နည်းက ကျွန်တော် ဖော်ပြထားတဲ့ Updater.exe နဲ့ Updates ဖိုင် ဒေါင်းတဲ့ နည်းပါ။ သူကလည်း အင်တာနက်ဆိုင်လာပြီး ဒေါင်းလုပ်ချမှ ရမှာပါပဲ။ ဘယ်နည်းသုံးသုံး ကြိုက်တဲ့နည်းကို သုံးပါ။ သူ့ကို အသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်ကတော့ ဒီနေရာမှာ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပြီး ပါပြီ။
kav က Updater.exe for Kaspersky Anti-Virus 2011 ကို password protected လို့ပြနေလို့ပါ
ကျွန်တော် ဘာ Password မှခံမထားပါဘူး - အဲတာ မူရင်း Kaspersky က ပေးထားတဲ့ ဒေါင်းလုပ် Link ပါ - ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒေါင်းလုပ်ပြန်ချပြီး စမ်းပြီးပါပြီ။ ဖြည်လို့ ရပါတယ်။ အဲတာကို ဖြည်လိုက်ရင် အထဲမှာ ခုလို ဖိုင် ( ၃ ) ဖိုင် တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Last edited by KznT; 24-06-2010 at 09:26 PM..
27-06-2010, 05:26 PM
Kaspersky Internet Security 2011 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2011 တို့အတွက် Offline Updates တွေမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun June 27 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KIS 2011 Sun June 27 2010
Last edited by KznT; 03-07-2010 at 03:17 PM..
Kaspersky Internet Security 2011 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2011 တို့အတွက် Offline Updates တွေမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun July42010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KIS 2011 Sun July42010
Updates for KIS_11.0.0.232.rar (139 MB)
Updates for KAV_11.0.0.232.rar (133.4 MB)
Kaspersky Internet Security 2011 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2011 တို့အတွက် Offline Updates တွေမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun July 11 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KIS 2011 Sun July 11 2010
Updates for KAV_11.0.0.232.rar (90.6 MB)
Kaspersky Internet Security 2011 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2011 တို့အတွက် Offline Updates တွေမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun July 18 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KIS 2011 Sun July 18 2010
Updates for KIS_11.0.0.232.rar (139.2 MB)
Updates for KAV_11.0.0.232.rar (133.6 MB)
19-12-2010, 08:01 AM
ပို့စ် 59 ခုအတွက် 545 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Updater.exe for Kaspersky Internet Security 2011 လေးတင်ပေးပါဦးဗျာ... ဒေါင်းလို့မရတော့လို့ပါ...
Find More Posts by ခေါက်ရောင်းသား
Originally Posted by ခေါက်ရောင်းသား
ကိုကေဇက် အစားကျွန်တော်တင် ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ
Last edited by soehtetpaing; 20-12-2010 at 02:11 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ soehtetpaing အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, နေမင်းမောင်, KznT, tu tu
အကိုကေဇက်ခင်ဗျာ..ကျတော်ဒီမှာပဲအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်.KVS 10 ကိုသုံးနေတာကြာပါပြီး..offline Update လုပ်ပြီးသုံး
နေတာကြာပါပြီး..အကိုသင်ပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်တာအစဉ်းပြေနေတာ..အခုဒီလမှာ offline Update လုပ်တာလုပ်မရတော့လို့ပါ..အဲဒါ
KVS 10 ကမကောင်းဘူးထင်ပြီး KVS 11 ကိုပြောင်သုံးတာလဲ Update မလုပ်ပေးဘူး..Updater.bat လေကိုနှိပ်ပြီးလုပ်တာနော်..
ခါတိုင်ဆိုရင်ရတယ်အခု Updates folder မှာဘာမှမရှိနေဘူ...ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကူညီပေးပါခင်ဗျာ..အကိုမရှိရင်လဲရှိတဲ့ညီအ
ကျွန်တော့် အထင်တော့ ကိုဇေယျာအေး သုံးနေတဲ့ Internet မှာ တစ်ခုခုလွဲနေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် - ကျွန်တော်က Kaspersky မသုံးတာ တော်တော်ကြီးကို ကြာပါပြီ - ကိုဇေယျာအေးပြောလို့ Download ချလို့များ မရတော့ဘူးလား ဆိုပြီး ကျွန်တော် Updater.bat ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး ပြန်စမ်းကြည့်တာ အားလုံး အရင်လိုပဲ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ ရတာတွေ့ရပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာကိုသာ ကြည့်ပါ။
တကယ်လို့ ကိုဇေယျာအေး Updater.bat ဖိုင်ကို သုံးပြီး ဒေါင်းလုပ်ချရတာ ပြဿနာ ရှိနေတယ်ဆိုရင် Universal updater ဆိုတာ ရှိပါတယ် - KLupdate.zip လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ သူ့ကို ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်ယူပြီး စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူလည်း Updater.bat ဖိုင် သဘောပါပဲ - Offline Updates တွေကို Download လုပ်တာပါ - သူ့ရဲ့ အားသာချက်က Kaspersky Lab ကထွက်သမျှ applications အားလုံးအတွက် Updates တွေကို တစ်နေရာတည်းကနေ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း download ချနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအသုံးပြုရတယ် ဆိုတာကို ဒီနေရာမှာ ရေးထားတဲ့ Stand-alone update utility " Updater.exe " အား အသုံးပြု၍ Updates ရယူလုပ်ဆောင်ခြင်း။ မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အဲ့နည်းနဲ့မှ အဆင်မပြေရင် Kaspersky ကနေ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်း အချိန်မှန်ထုတ်ပေးနေတဲ့ Antivirus Updates ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာပါ။ အဲ့ဒီ့ Updates တွေကိုသုံးပြီးတော့လည်း Antivirus updates ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းကတော့ မှန်ရာပြောရရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပဲ သိတယ် - တစ်ခါမှတော့ အသေးစိတ် စမ်းမကြည့်ဖူးဘူး - သူက Updates မှာမှ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း အမျိုးအစား သုံးမျိုး ကွဲသေးတယ်။ ( အချိန်တွေကတော့ နာရီလိုက် နေ့အလိုက် ပြောင်းနေတယ်။ )
(av-i386-daily.zip, 10 MB - 16 April 2011 09:13)
(av-i386-weekly.zip, 9.78 MB - 10 April 2011 05:20)
(av-i386-cumul.zip, 114.28 MB - 10 April 2011 05:20)
ဘာတွေက ဘယ်လိုကွာပြီး - ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုသုံးရတယ် - ဘယ်ဟာကို သုံးရင် ဘာတွေ မလုပ်ရဘူး ဘာတွေလုပ်ရမယ် - ဘယ်ဟာတွေ ရှောင်ရမယ်ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ Kaspersky က အသေးစိတ် ရေးထားပေးတာ ရှိပါတယ်။ အဲ့တာလေးကို ဖတ်ပြီးစမ်းကြည့်ကြည့်ပါ။
Last edited by KznT; 16-04-2011 at 03:14 PM..
ကိုစံငြိမ်း, စနိုးလေး, သန့်ဇင်ဌေး, ဇေယျာအေး, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, bagothar85, g00gle, sky4ster
Kis 2011 ကိုတင်ထားတာ ပြန်ဖြုတ်ရင်မပြုတ်လို့ပါ။
ဘာလိုနေမှန်းကိုမသိဘူး အကူအညီလေးပေးပါအုံး နည်းလမ်းလေး
အဲဒီ link က အတိုင်း လုပ်ကြည့်ပါလားဗျာ!
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ phyomyintthein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
updater.exe(for kav2011 and kis2011)
လေး ရချင်လို့ပါဗျာ ကိုkznt ရေ ကျနော်ဒေါင်းတာ အဆင်မပြေလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ပြန်တင်ပေးပါအုံးခင်ဗျာ
Originally Posted by kozaw.dagon
kav အတွက်လင့်ကတော့ ဒေါင်းလို့ရပါသေးတယ်.. Kis အတွက်ကတော့ လင့်တွေသေကုန်ပါပြီ... အဲဒါ ကျွန်တော် ရှာပြီး ၂ ခုလုံးကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ...
updater.exe for kav 2011
updater.exe for kis 2011
သန့်ဇင်ဌေး, juwathan, kozaw.dagon
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ ကျနော်လည်းကက်စပါကိုဘယ်လိုကနေဘယ်လိုသုံးရမှန်မသိဘူးဗျာ ။ ဖြစ်နိုင်ရင်စပြီတင်တာကနေအင်တာနက်နဲ့ချိတ်ပြီးသုံးတဲ့အက်တစ်လုပ်ပုံတွေ ။ အော့လိုင်းအပ်ဒိတ်လုပ်ပုံတွေကို အခုလိုပဲပုံနဲ့တကွင်ပေးပါလာခင်ဗျာ ။ ကျနော်မှာရှာလိုက်ရတာ (၂)လလောက်ရှိပြီ ။ ဒါပေမယ့်သိတာတွေကဟိုတစဒီတစဖြစ်နေတယ်။
Find More Posts by နွယ်လေးမေ
antivirus, how to, kaspersky
Online Gtalk (not need to install) လူဖုန်း Chat software များဆိုင်ရာ 14 14-12-2010 10:41 AM
Kaspersky Anti-Virus ရဲ့ Activation Code ဖြင့် Key file တောင်းနည်း ယဉ်ဌေး Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ 13 18-10-2010 11:11 AM